Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Värmlands län / Kristinehamn
Degmada Kristinehamn waxaa ku nool dad gaaraya 24 000 waxeeyna ku taal agagaarka balliga ugu weyn ee Iswiidhan ee Vänern ee ku yaal gobolka Värmland.
1,384 kiilomitir oo laba jibaaran
Karlstad 42 kiilomitir
Örebro 71 kiilomitir
Göteborg 251 kiilomitir
Degmada Kristinehamn waxaa yaal fursado fiican oo dhinaca meela loo damaashaad tago ah, meelo qurux badan oo lagu nasado caruurtana eey ku cayaaraan. Intaas waxaa sii dheer adeega bulshada oo tayadiisu sarreeyso, daryeelka caruurta iyo iskoollka oo fiican iyo dhaqaalaha iyo wax soosaarka degmada oo sii kobcaya. Gacmo furan kusoo dhowoow!
Degmada Kristinehamn waxaa ku yaal 11 dugiyada hoosedhexe ah kuwaasoo ka bilowda fasalka xanaanada carruurta illaa iyo fasalka sagaalaad.
Dugsiyada sare ee degmada Kristinehamn waxuu ka kooban yahay dugsiyada Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet. Dugsiyadaas waxaa lagu bartaa 14 barnaamijyo waxbarashadeed kala duwan ah, waxaa kaloo jira dugsi sare oo loogu tala galay ardayda dhimirka la' oo lagu barto shan barnaamijyo waxbarashadeed kala duwan.
Degmada Kristinehamn waxaa yaal fursad aad ku baran kartid luqadda iswiidhishka oo loogu tala galay dadka qaxootiga ah. Waxbarashada waxaa loogu tala galay dadka qaxootiga ah, kana weyn 16 sano isla markaasna ku qoran degmada Kristinehamn, heysanin cilmi dhinaca luqadda iswiidhishka ah.
Waxaa jira waxbarasho loogu tala galay dadka waaweyn (komvux), oo lagu baxsho koorsooyin kala duwan iyo waxbarasho dhinaca farsamada gacanta ah. Jaamacadda ugu dhow waxeey ku taal degmada Karlstad, waxaana aada gaadiidyo badan oo kuwa safarka ah.
Bas ama tareen ayaad ugu safri kartaa degmada gudaheeda iyo degmooyinka kale ee gobolka Värmland, shirkadda maamusha gaadiidyada safarka waxaa la dhahaa Värmlandstrafik.
Shirkado, taageero iyo talo-bixin.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Kristinehamn